शकुन शास्त्र अनुसार शरीरको कुन अंगमा माउसुली खस्दा के फल हुन्छ ?
जनवरी 17, 2019 साइन्स इन्फोटेक	0 Comments माउसुली, शकुन शास्त्र, शरीर
शरीरको कुन अंगमा माउसुली खस्दा के हुन्छ ? धर्मशास्त्रका अनुसार प्रकृतिले भविष्यमा हुने घटनाको जानकारी दिन विभिन्न माध्यम बनाएको छ । पशुपंक्षी वा जीवन जन्तु विभिन्न क्रियाकलापको माध्यमबाट हामीलाई भविष्यमा हुने घटनाको जानकारी दिन्छन् । तपाइँलाई थाहा नहुन सक्छ घरमा भेटिने माउसुली पनि भविष्यमा हुने विभिन्न घटनाबारे जानकारी दिने जीव मानिन्छ । तपाइँले माउसुलीले गरेको संकेत बुझ्नु भो भने सम्भावित घटनाबारे अनुमान गर्न सजिलो हुन्छ ।
कहिलेकाहीँ पशुपक्षी र जीवजन्तुले भविष्यमा हुनसक्ने विभिन्न किसिमका घटनाका बारेमा अवगत गराइदिन्छन् । घरमा पाइने माउसुलीले भविष्यमा हुने धेरै घटना बताइदिन्छन् । यो वर्णन शकुन शास्त्रमा गरेको पाइन्छ । शकुन शास्त्र अनुसार शरीरको कुन अंगमा माउसुली खस्दा के फल हुन्छ ? जानौ ।
टाउको : सम्पत्ति पाइने सम्भावना
कपाल : मृत्युको बेला भएको संकेत
दाहिने कान : गरगहना प्राप्ति
देब्रे कान : आयु वृद्धि
नाक : भाग्योदय
मुख : मीठो भोजन
दाहिने गाला : उमेर बढ्ने
देब्रे गाला : पुरानो साथी भेट
गर्दन : यशप्राप्ति
दाह्री : डरलाग्दो घटना
जुँगा : सम्मान प्राप्ति
आँखीभौं : धनहानि
दाहिने आँखा : कुनै मित्रसँग भेट
देब्रे आँखा : छिट्टै धनहानि
घाँटी : शत्रुनाश
दाहिने काँध : विजय प्राप्ति
देब्रे काँध : नयाँ शत्रु बन्ने
दाहिने हात : धनलाभ
देब्रे हात : सम्पत्ति नाश
दाहिने हत्केला : कपडा पाइन्छ
देब्रे हत्केला : धन नाश
दाहिने छाती : धेरै खुशी
देब्रे छाती : घरमा क्लेश
कमरको बीचमा : आर्थिक लाभ
पिठ्युँको दाहिने भाग : सुख
पिठ्युँको देब्रे भाग : रोग
पिठ्युँको बीच भाग : घरमा कलह
नाभि : मनोकामना पूर्ण
दाहिने जाँघ : सुख
देब्रे जाँघ : शारीरिक पीडा
दाहिने घुँडो : यात्रा
देब्रे घुँडो : बुद्धिनाश
दाहिने गोडो : ऐश्वर्य प्राप्ति
देब्रे गोडो : बिरामी
दाहिने पाइतालो : श्रीप्राप्ति
देब्रे पाइतालो : व्यापार हानी
माउसुलीलाई छुँदा पुच्छर छोडी किन भाग्छ ?
← अरूचिका कारणहरु र उपचार
हृदयघातमा जीवनशैली परिवर्तन →
शरीर कमजोर हुँदा खाने खानेकुराहरु
मार्च 29, 2019 मार्च 29, 2019 साइन्स इन्फोटेक 1
जनवरी 16, 2020 साइन्स इन्फोटेक 0